Translate dvoranima from Croatian to Burmese - MyMemory
Results for dvoranima translation from Croatian to Burmese
Uzimat æe najbolja vaa polja, vae vinograde i vae maslinike i poklanjat æe ih svojim dvoranima.
သင်တို့လယ်ကွက်၊ စပျစ်ဥယျာဉ်၊ သံလွင်ဥယျာဉ် အကောင်းဆုံးတို့ကို ယူ၍ မိမိကျွန်တို့အား ပေးလိမ့် မည်။
Uzimat æe desetinu od vaih usjeva i vaih vinograda i davat æe je svojim dvoranima i svojim slubenicima.
သင်တို့မျိုးစေ့ စပျစ်သီးဆယ်ဘို့တဘို့ကို ယူ၍ သူ၏အရာရှိ အမှုထမ်းတို့အား ပေးလိမ့်မည်။
Nato kralj reèe svojim dvoranima: "Ne znate li da je danas pao knez i velik èovjek u Izraelu?
ရှင်ဘုရင်ကလည်း၊ ဣသရေလအမျိုး၌ မင်းသားဖြစ်သောသူ၊ ကြီးမြတ်သောသူတပါးသည် ယနေ့ဆုံးကြောင်းကို သင်တို့မသိသလော။
Tada Aki reèe svojim dvoranima: "Vidite dobro da je èovjek lud! Zato ga dovodite k meni?
အရူးကို ငါအသုံးလိုသည်ဟု သင်တို့သည် ထင်လျက် ငါ့ရှေ့မှာ အရူးလုပ်စေခြင်းငှါ ဤသူကို သွင်းကြသလော။ ဤသူသည် နန်းတော်ထဲသို့ ဝင်ရမည်လောဟု ကျွန်တို့အား ဆို၏။
aul razloi svome sinu Jonatanu i svim svojim dvoranima svoju namjeru da ubije Davida. Ali Jonatan, aulov sin, vrlo je volio Davida.
Glas se proèuje u faraonovu dvoru: "Stigla Josipova braæa!" Bilo je to drago faraonu i njegovim dvoranima.
ယောသပ်အစ်ကိုတို့သည် ရောက်လာကြပြီဟု နန်းတော်၌ သိတင်းကြား၍၊ ဖာရောဘုရင် အစရှိသော ကျွန်တော်မျိုးတို့သည် နှစ်သက်ကြ၏။
Na svim svojim pohodima, kamo ga je god slao aul, David bijae sretne ruke i aul ga postavi na èelo svojim ratnicima; omilje on svemu narodu, pa i aulovim dvoranima.
Tada progovori Doeg Edomac, koji je stajao meðu aulovim dvoranima, i reèe: "Ja sam vidio Jiajeva sina kad je doao u Nob k Ahimeleku, Ahitubovu sinu.
ရှောလု၏ ကျွန်အုပ် ဧဒုံ အမျိုးသား ဒေါဂက၊ ယေရှဲ၏သားသည် အဟိတုပ်၏သား အဟိမလက်ရှိရာ နောဗမြို့သို့ရောက်ကြောင်းကို ကျွန်တော်မြင်ပါ၏။
Kralj Izraela reèe svojim dvoranima: "Znate li da je Ramot Gilead na? A mi ne poduzimamo nita da ga otmemo iz ruke aramejskog kralja."
ဣသရေလရှင်ဘုရင်ကလည်း၊ ဂိလဒ်ပြည် ရာမုတ်မြို့သည် ငါတို့ နိုင်ငံအဝင်ဖြစ်သည်ကို သင်တို့ မသိလော။ ငါတို့သည် ရှုရိရှင်ဘုရင်လက်မှ မနှုတ်မယူဘဲ ငြိမ်သက်စွာ နေကြပြီတကားဟု မိမိကျွန်တို့အားဆို၏။
David sakupi u Jeruzalem sve izraelske knezove, plemenske knezove i poglavare od redova koji su sluili kralja, tisuænike, stotnike i nadstojnike nad svim imanjem i blagom kraljevim i blagom njegovih sinova, zajedno s dvoranima i junacima i svim hrabrim vojnicima.
အို ဗင်္ယာမိန် အမျိုးသားတို့၊ ယေရှဲ၏သားသည် လယ်များ၊ စပျစ်ဥယျာဉ်များကို သင်တို့ရှိသမျှ၌ ဝေပေးနိုင်သလော။ သင်တို့ရှိသမျှကို လူတထောင်အုပ်၊ တရာအုပ်အရာ၌ ခန့်ထားနိုင်သလော။
Kad je Jehu zavrio prinos paljenice, naredi tjelesnoj strai i dvoranima: "Uðite, pobijte ih! Nitko neka ne iziðe!" Tjelesna straa i dvorani uðoe, pobie ih otricom maèa i prodrijee sve do svetita Baalova hrama.
Nato David reèe Abiaju i svim svojim dvoranima: "Eto, moj sin koji je izaao od moga tijela radi mi o glavi,akamoli neæe sada ovaj Benjaminovac! Pustite ga neka proklinje ako mu je Jahve to zapovjedio.
ကြည့်ပါ။ ငါ့ကိုယ်ထဲကထွက်သော ငါ့သားရင်းသည် ငါ့အသက်ကို ရှာ၏။ ထိုဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားသည် ထိုမျှမက အခွင့်ရှိလိမ့်မည်။ သူ့ကို ရှိပါလေစေ။ ကျိန်ဆဲပါလေစေ။ ထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူပြီ။
Tada David reèe svim svojim dvoranima koji bijahu s njim u Jeruzalemu: "Ustanite! Bjeimo! Inaèe neæemo uteæi od Abaloma. Pohitite brzo, da on ne bude bri i ne stigne nas, da ne obori na nas zlo i ne pobije grada otricom maèa!"
ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ ငါတို့သည် ထ၍ပြေးကြကုန်အံ့၊ မပြေးလျှင် အဗရှလုံလက်နှင့်မလွတ်၊ အလျင်အမြန် ထွက်ကြကုန်အံ့။ သို့မဟုတ်လျှင် သူသည် ချက်ခြင်းတိုက်လာသဖြင့်၊ ငါတို့ကို ဘေးပြု၍ မြို့ကိုလည်း ထားနှင့် လုပ်ကြံလိမ့်မည်ဟု ယေရုရှလင်မြို့တွင် အထံတော်၌ရှိသော ကျွန်အပေါင်းတို့အား မိန့်တော်မူ၏။
voorzitterschap (Dutch>German)czerny (Italian>English)bankfaillissementen (Dutch>French)ar akcijos brangs? (Lithuanian>English)never say never (English>French)spiderman (English>French)tuhumwire (English>French)pob lwc i cymru (Welsh>English)aluminiumbeschichtungsprozeß (German>English)quo vides (Latin>English)ndino musvare iwe (Shona>English)utere non numera in math? (Latin>English)επιμελητήριο (Italian>German)hi friend with benefits (English>Tagalog)ter vervanging daarvan (Dutch>English)jesus christ (English>Hindi)lucretiam collatini (Latin>French)evaluatiedeskundigheid (Dutch>French)indfaldsvinkler (Danish>English)ne hoc faciamus (Latin>French)napapagod (Tagalog>English)francë (Albanian>German)finestra formato (Italian>English)aankoopfactuur (Dutch>English)kaya ko ba? (Tagalog>English)